Hevitra momba ny headphone Elephone Wireless: The Elepods X | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | About us, hevitra
Ao amin'ny Androidsis tsy mitsahatra ny mampiseho vokatra vaovao izahay mifandraika ary mifandray amin'ny finday avo lenta. Androany indray dia miaraka amin'ny sasany isika Headphone tsy misy tariby TWS, ny Elepods X. Fanoloran-tena amin'ity karazana fitaovana ity izay avy am-pelatanan'ny mpanamboatra smartphone finday Elephone.
Priori ny fisehoan'izy ireo aseho dia mahafinaritra tokoa ary tsy azontsika atao ny misoroka ny mahita "aingam-panahy" mazava amin'ny endriny. Raha mbola mampiasa an'ireny headphone misy tariby ireny ianao, angamba fotoana izao handehanana tsy misy tariby, ary ampahafantarinay anao anio safidy hafa mahaliana miaraka amin'ny endri-javatra avo lenta.
1 Ny Elepods X, headphone tsy misy complexe
2 Unboxing the Elepods X
3 Volavola sy fisehoan'ny Elepods X
4 Ny teknolojia natolotry ny Elepods X
5 Latabatra famaritana Elepods X
Ny Elepods X, headphone tsy misy complexe
Elephone Miorina mafy izy io fa tao anatin'ny fotoana fohy dia nanao anarana fantatra ao anatin'ny tontolon'ny smartphone. Afaka nahita ny fomba maro amin'ireo finday avo lenta no afaka nanosotra ny soroka tamin'ny orinasa hafa mifanohitra bes. Ny tsiambaratelo hahatongavana amin'ny sarambabem-bahoaka dia tena tsotra. Manolora a vokatra tsara amin'ny vidiny lafo, tsotra sy sarotra tokoa.
Androany isika dia mijery ny iray amin'ireo kojakoja mahavariana indrindra ao anatin'ireo vokatra atolotray azy. Ankoatry ny telefaona finday, amin'ireo maodely roa an'ny smartwatches sy webcam, ao amin'ny katalaoginy dia ahitantsika koa ny headphone tsy misy tariby. Amin'ity indray mitoraka ity mifantoka amin'ny headphones Elepods X izahay.
Headphones sasany Marina Wireless Stereo miaraka amin'ny fitaomana miharihary ny ozinina Cupertino. Fa ankoatra ny a Mitovy endrika ara-batana mitovy amin'ny AirPods Pro, Elepods X dia manan-javatra betsaka atolotra amin'ny resaka fampisehoana, kalitaon'ny feo ary fizakan-tena.
? Ianao ve mitady vokatra toy izao ary tsy te handany mihoatra ny ilaina? Raiso ny Elepods X ao amin'ny tranonkalany ofisialy miaraka amin'ny fihenam-bidy.
Unboxing the Elepods X
Ny mijery ao anaty boaty amin'ireo fitaovana azontsika dia zavatra tiantsika hatrany. ny unboxing headphones dia matetika tsy dia mahagaga ihany koa. Saingy fantatsika fa tianay foana ny hahafantatra izay hananantsika raha mividy modely iray na iray hafa. Amin'ity tranga ity, ho fanampin'ny auriculares, ary ny raharaha charger, araka ny filazantsika fa tsy mahita be.
Manana tariby mitondra enta-mavesatra izahay miaraka aminy USB Type-C endrika. Zavatra iray mitaona ny famahanana haingana sy azo antoka kokoa. Ary satria mijery headphones misy endrika "in ear" isika dia mahita ihany koa paosy maromaro fanampiny ho an'ny sofina manana habe samihafa. Miaraka amin'ireo napetrany dia manao 6 izy ireo mba hahitanay ilay mifanaraka amin'ny anatomia antsika.
Volavola sy fisehoan'ny Elepods X
Efa naneho hevitra momba azy io hatrany am-boalohany isika, saingy mbola mazava kokoa aza ny filazanay azy sao misy fisalasalana Elephone's Elepods X dia dika mitovy amin'ny AirPods Pro avy amin'i Apple. Manomboka amin'ity toerana ity, ary mba tsy handehanana amin'ny antsasaky ny refy, raha tianao AirPods dia tianao koa ny headphone Elephone. Amin'ity tranga ity dia afaka nanandrana santionany mainty izahay. Fa mahita modely vita amin'ny fotsy ihany koa isika.
Ho an'ny maro, ny fahombiazan'ny AirPod voalohany, ankoatry ny kalitaon'ny feo sy ny zava-bitan'izy ireo dia ny endrik'ilay headset. Mitovy amin'ny headphones tariby fa miaraka amin'ny haitao tsy misy tariby sy izay mety amin'ny sofina. Very io tamin'ny maodely vaovao nahazo ny aingam-panahin'ny Elepods X.
? Azonao antoka ve fa ireo no tianao, Eto ianao dia afaka mividy azy ireo amin'ny tranokala ofisialy
Ho an'ny maro hafa, ny haavon'ny tery atolotry ny mpanala izay mijanona ao anaty ny sofina mahatonga ny tsara kokoa ny traikefa fihainoana. Manasaraka bebe kokoa amin'ny tabataba any ivelany izy ireo ary miteraka a vokany tsy misy dikany izay manasongadina ny fahatsapana ny feo. Araka ny lazaintsika hatrany dia resaka hevitra sy tsiro no resahina.
Raha mijery ny sofina, dia namboarina tamin'ny plastika mangirana tsara, miaraka am-pamaranana fatratra. Tsy fantatsika ny fomba hanoheran'izy ireo ny fahalavoana, fa na eo aza ny lanjany maivana toa matanjaka izy ireo. Ety ivelany no ahitantsika a ambonimbonyl ahafahantsika mifandray amin'ny fanaraha-maso ny famerenana mozika sy ny antso. Eo ambany keliny kely taratra fahazavana izay hikipy rehefa mifandray izy ireo, ary amin'ny faran'ny iray ihany lavitra ny farany dia ny mikrô.
El raharaha famandrihanaa dia manana endrika natoraly kokoa nefa tsy misy itovizany amin'ny tsena, farafaharatsiny tsy dia miharihary. Amin'ny a habe ahazoana aina ao anaty paosy rehetra ary vita amin'ny plastika matte, mitovy loko amin'ny headphones. Ao aminy mijanona mitsivalana ny headphones ary mifanaraka tanteraka amin'ny faritra misy azy.
Ao aminy mivantana nahita iray izahay taratra fahazavana elongated fa, miankina amin'ny blinks, manolotra antsika fampahalalana momba ny vidin'ny bateria an'ny headphones na ilay tranga ihany. Hipoaka tampoka ihany koa rehefa mitady fitaovana fampifanarahana na rehefa mifandray amin'ny finday avo lenta. Ao amin'ny aoriana dia anao Seranan-tsambo fampitaovana USB Type-C.
Ny teknolojia natolotry ny Elepods X
Efa nilaza taminay izahay fa ny Elepods X tsy vitan'ny hoe headphones tsara tarehy fotsiny izy ireo, na dika mitovy amin'ny headphones malaza indrindra eny an-tsena. Ho fanampin'izany rehetra izany dia manana ny haitao ampy izy ireo ka afaka manome lanja tanteraka ny fividiananao. ny fifandraisana Bluetooth 5.0 miantoka playback mozika milamina sy tsy misy fahatapahana.
Miankina amin'ny Fanamarinana IPX5 mahazaka ranon-javatra sy vovoka ka tsy hatahotra ny hampiasa azy ireo ianao rehefa manao fanatanjahan-tena any ivelany. ny mora ny fifandraisana io koa dia teboka manohana azy. Raha vantany vao ampifanarahana amin'ny fitaovana misy antsika, tsy mila manokatra ny boaty fotsiny izahay mba hifandraisan'izy ireo mandeha ho azy. Teknolojia sy famolavolana eo an-tananao izay azonao atao ny efa mividy azy ireo ao amin'ny tranokala Elephone miaraka amina fihenam-bidy.
Andininy iray izay mahaliana azy ireo kokoa dia ny ananan'izy ireo izay tadiavin'ny rehetra amin'ny headphone anio, fanafoanana ny tabataba mavitrika. Fanafoanana ny tabataba izay mivoatra hatramin'ny maody 3 tsy mitovy amin'ny maody fanatanjahantena, izay ambany kokoa ho an'ny fiarovana ny fanafoanana ny tabataba, mahatratra hanafoanana hatramin'ny 30 desibre farafaharatsiny. Tsy isalasalana fa antony ampy hahatonga ny Elepods X ho isan'ireo headphone avo lenta.
La fizakan an'ny Elepods X dia iray hafa amin'ny heriny. Manana enta-mavesatra isika 50 mAh isaky ny sofina, zavatra ahafahantsika mankafy, miaraka amina fiampangana tokana, playback hatramin'ny 5 oran tsy tapaka. Fahaleovan-tena izay ampitomboina noho ny 550 mAh izay misy ny tranga fiampangana.
Latabatra famaritana Elepods X
modely Elepods X
endrika Ao anaty sofina
loko Mainty sy fotsy
lavitra hatramin'ny 10 metatra
Bateria finday 50 Mah
fizakantena hatramin'ny ora 5
Tranga famahana bateria 550 Mah
vidiny 42.34 €
Rohy mividy Elepods X
Miankina amin'ny Fanafoanana ny tabataba hybrid mahery manavaka azy ireo amin'ny maro an'isa.
ny touch control mahazo aina tokoa izy ireo ary manome safidy maromaro.
La fizakan an'ny headphones izay manitatra miaraka amin'ny case charge.
El feo masiaka sy mahery izy io.
Fanafoanana ny tabataba
El kely loatra ny famolavolana tany am-boalohany mety ho ampy ny antony hanipahan'ny mpampiasa sasany azy satria dika mitovy amin'ny maodely hafa izy io.
Mety hisy vokany marefo Ary tsy fantatsika ny fomba hiaretany ny fahalavoana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Hevitra momba ny headphones tsy misy tariby Elepods X
Tazomy amin'ny daty ity app 'offline' antsoina hoe My Income ity ny volanao sy ny fandanianao rehetra